Kungani WonderfulPCB - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
PCB Wonderful njengoba nje inkampani ehola nge kuka-20 eminyakeni nakho PCB (Elanyatheliswa Circuit Board) Imboni.
We ngokukhethekile yokukhiqiza nokuthengisa ephezulu ukucacisa, Isidlulisilwazi PCB double Emaceleni futhi multilayer PCB.
Umkhiqizi oqondile ukubekwa kwentengo kwamakhasimende kuyosilethela win-win ubuhlobo wokubambisana!
Certified Quality Amazinga
Isizathu esiyinhloko esenza siyiqembu ayethanda PCB nomkhiqizi ukuze uthole amaklayenti emhlabeni wonke nokunamathela kwethu izindinganiso izinga elawula ezisebenza zonke indawo umkhakha wethu. Ngokwesibonelo, PCB yethu ejwayelekile ukuhlangabezana afune izinto ngenkani kwabanye IPC2 izinga ejwayelekile, kuyilapho yesiqalo ephathelene nokudabuka amabhodi ethu ekhiqizwa ukufeza IPC1 ukuhambisana. Ngaphezu kwalokho, amasevisi wethu inhlangano ukugcwalisa IPC3 imfuneko ejwayelekile. Sesikhathele imithetho ngokugcwele ne ISO9001: 2008 ukuphathwa izinga izinhlelo.
Quality okuqinisekisiwe nge Ngo-indlu yethu Quality Izibuyekezo
Sithole lwenteke eziningi izinyathelo ukuqinisekisa ikhwalithi izinqubo zethu kanye nemikhiqizo. wazibonela ubunjiniyela ithimba amasheke yethu yonke design PCB ngaphambi kokuqala esigabeni ukukhiqizwa / inhlangano ukuqinisekisa azikho amaphutha nokungapheleli esakuzuza ukuthi umklamo ihlangabezana Ukucaciswa ikhasimende yangempela. Sithatha isinyathelo esingeziwe siqhuba Design for Ukwakha (DFM) ukuhlolwa ngaphandle kwemali eyengeziwe. Siphinde sibe izinga ukulawula umnyango ngokugcwele kubasebenzi ayohlola esibanzi nokuhlolwa phambi lokuthumela umkhiqizo osuphelile ukuba luhlobo yakho, kufaka phakathi Test kagesi, Automated Optical Ukuhlolwa (Aoi), Automated-X-ray Ukuhlolwa (AXI), njll Ungaba Nokho, uthembele ngokuphelele izinga PCB yakho kanye nokusebenza.
Londoloza isikhathi usebenze ngempumelelo
Sinikeza amasevisi turnkey PCB LoMhlangano Okugcwele, okuhlanganisa PCB bumbela, ingxenye zokuthenga, futhi PCB inhlangano. Inkonzo yethu eyodwa-stop negates isidingo ukuze uphathe abahlinzeki ezihlukahlukene ngaphesheya kwe-migoqo ezahlukene, bese kukhula kahle yakho kanye nezindleko-ukusebenza. Njengoba inkampani naphakathi, thina zilalela ngokugcwele izidingo amakhasimende ethu futhi anganikeza isevisi ngesikhathi esifanele uqobo ukuthi izinkampani ezinkulu ngeke sokulingisa. okuyisibonelo iklayenti ukwaneliseka izinga wethu liwubufakazi ikhono lethu umxhwele.
namanani entengo ezingabizi futhi wokuncintisana
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna PCB ambalwa noma izinkulungwane PCB, uzothola engcono ukubaluleka PCB amasevisi kithi.
Excellent Service kwamakhasimende
Sifuna ukunikeza aphakeme services value PCB nomkhulu kunabo bonke ukuhweba nesipiliyoni ngentengo evumayo. Thina ukubhekana izinkulungwane okuyingxenye izinombolo ngokonyaka futhi kule minyaka yethu engu wokusebenza kube yimanje 20, sifunde ukuthi ukukhonza amakhasimende ethu nokuthi ukuba babakhonze kahle. Lezi yizinto ezimbalwa nje yezinto amakhasimende ethu afana ngathi:
• esheshayo inthanethi ecaphuna khona, ukuhlela Ukuhlelwa kabusha izici
• Ikhwalithi yibhange amasevisi
• Competitive intengo & CHA imiz oda ubuningi edingekayo
• 99% + ikhasimende ukwaneliseka izinga
• Ithimba Unolwazi itholakale ngendlela yefoni imeyili
• Khulula DFM isheke onjiniyela abaqeqeshiwe
• Umsebenzi test esekelwe izidingo zamakhasimende ethize
• Ayikho tooling icala olwengeziwe ukuze PCB reorders
Ngicela ungi wonderfulpcb@wonderfulpcb.com ukuthola ulwazi oluthe xaxa noma Xhumana nathi inthanethi